Mifanohitra amin’ny siansa ny finoan’ity mpanjaka ity ny raokandro ho fanefitry ny COVID-19 · Global Voices teny Malagasy
Mety hamitaka ny vahoaka ny fanaovana fanambarana tsy voaporofo
Voadika ny 30 Mey 2020 15:39 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Italiano, Yorùbá, русский, Français, українська, Ελληνικά, عربي, Română , English
Niditra Twitter ny Ọọ̀ni, izay miandraikitra ihany koa ny Filan-kevitra Nasionalin'ireo Mpitondra Nentin-drazana ao Nizeria (Council of Traditional Rulers of Nigeria) (NCTRN) ary nandefa andiana sioka mba hanambarana ny fikarohany, ary nilaza fa natao andrana tamin'ny tenany manokana sy ny hafa tratran'ny coronavirus ity fangarona ravi-kazo tsy manam-paharoa ity. Tamin'ireo sioka tamin'ny 30 Marsa, niantso ireo mpikaroka ny Ọọ̀ni mba hampiasa ravi-kazo natoraly hamokarana vakisiny.
Arovy ny tenantsika.#Coronavirus #COVID19
Ahitana lahatsary roa miaraka amin'ny fampahafantarana amin'ny antsipirihany momba ireo fanefitra vita amin'ny ravi-kazo ny sioka, anisan'izany ny fampiasana tongolo be mba hanesorana ireo aretina miverimberina sy ny fampiasana emboka mba hamongorana ny “angovo miiba.”
Isaky ny volana Jiona– fanombohan'ny alimanakan'ny taona vaovao ao Yorùbáland — mivory ireo mpomba ny andriamanitry ny fahendrena (Ifá) eo amin'ny kôsmôlojia Yorùbá amin'ity fetibe momba ny Òkè Ìtasẹ̀ ity ary mandray fitenenana sy maminany ny ho avy ny Ifá.
Tamin'ny 6 Jiona 2019, nandritra ny Fetibe Manerantany Ifá, naminany momba “ny fahatomoran'ny fahaviniran'ny ady valan'aretina tsy hita maso” ny Òtúrá Méjì ao amin'ny Ifá. Heverina ankehtriny fa COVID-19 izany faminaniana izany.
Nanohana ny fanafody nentim-paharazana ho toy ny fitsaboana voalohany ny Fikambanana Manerantany momba ny Fahasalamana (OMS) ary namoaka fampahafantarana momba ny fanadihadiana ara-etika mikasika ny fanefitra ravi-kazo ho an'ny fahasalamana manerantany.
Na dia izany aza, nanazava tsara ihany koa ny OMS fa tsy misy ny fanefitra na vakisiny ho an'ny COVID-19 na coronavirus.
Ohatra, milaza ny mpanjaka fa mamono angovo miiba ny tongolo be ary manome angovo miabo. Afaka mamono sy mamongotra ny otrik'aretina ary manamafy ny hery fiarovana ny tongolo be nosilahana apetraka ambanin'ny tongotra.
Nolavin'ny Dr. Adéoyè ihany koa ny fanambaran'ny mpanjaka fa mahomby ny fandoroana emboka.